သွေးဖိအားကို ဘယ်လို စနစ်တကျတိုင်းတာမလဲ - Hello Sayarwon
သွေးဖိအားကို ဘယ်လို စနစ်တကျတိုင်းတာမလဲ
သင့်သွေးဖိအားဟာ သင့်ကျန်းမာရေးကို ညွှန်ပြနေတဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးဖိအားကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူ အကူအညီမပါဘဲ မိမိနေအိမ်မှာ တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ သွေးဖိအားကို ဘယ်လို စနစ်တကျ တိုင်းတာရမလဲဆိုတာ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဆိတ်ငြိမ်သည့်နေရာတစ်ခုတွင် သင့်နှလုံးခုန်သံကို နားထောင်ပါ။ သွေးဖိအားမတိုင်းတာခင် ၅မိနစ်ခန့် အနားယူပါ။
ဆီးသွားချင်လျှင် သွားထားပါ။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဖြေလျော့ထားပါ။ ကိုယ်စိတ်ဖိစီးနေချိန်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးကာစ အချိန်များတွင် မတိုင်းတာသင့်ပါ။ ကဖင်း သို့မဟုတ် ဆေးရွက်ကြီး အသုံးပြုထားလျှင် အနည်းဆုံး နာရီဝက်ကြာမှ တိုင်းပါ။
ကျောမှီပါသည့် ကုလားထိုင်တွင် ခြေထောက်မချိတ်ဘဲ မတ်မတ်ထိုင်ပါ။ ခြေဖဝါးနှစ်ဖက်လုံးကို ကြမ်းပြင်နှင့်ထိထားပါ။
အင်္ကျ ီလက်ရှည်ဝတ်ထားလျှင် လက်မောင်းအထိ ခေါက်တင်ပါ။ ခေါက်တင်မရပါက အပေါ်အင်္ကျီချွတ်လိုက်ပါ။
လက်မောင်းကို နှလုံးတည်နေရာနှင့် တစ်တန်းတည်းထားပါ။
သင့်သွေးဖိအားကို သင်ကိုယ်တိုင် တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
သွေးခုန်နှုန်းကို အရင်စမ်းသပ်ပါ။ လက်ညှိုးနှင့်လက်ခလယ်ကို ကွေးထားသည့် တံတောင်ဆစ်အလယ် (တံကောက်ခွက်အလယ်) တွင်ထားပြီး စမ်းသပ်ပါ။
သွေးဖိအားတိုင်းကိရိယာ၏ လက်ပတ်ကို လက်မောင်းတွင်ပတ်ပါ။ လက်ပတ်အောက်ခြေသည် တံကောက်ခွက်၏အပေါ် (နားကြပ်ခေါင်းထားမည့် နေရာအပေါ်) ၂.၅ စင်တီမီတာ (တစ်လက်မ) အကွာတွင် ရှိရမည်။ သွေးဖိအားတိုင်းကိရိယာအချို့ရဲ့ လက်ပတ်မှာ နားကြပ်ခေါင်း ထားရမယ့်နေရာကို မြားဖြင့်ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်နှင့်တိုင်းရသည့် သွေးဖိအားတိုင်းကိရိယာ အသုံးပြုနည်း
နားကြပ်ကို နားတွင်တပ်ဆင်ပြီး သင့်နှလုံးခုန်သံကို နားထောင်ပါ။
လက်တစ်ဖက်က သွေးဖိအားကို ပြသသည့် နာရီပုံသဏ္ဍာန် ဒိုင်ခွက်ကိုကိုင်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က ဘောလုံးကိုကိုင်းပါ။
ဘောလုံးအောက်ခြေရှိ လေပေါက်ကို ပိတ်ပါ။ (လေပေါက်ခလုတ်ကို နာရီလက်တံသွားသည့်အတိုင်း လှည့်ပါ)
ဒိုင်ခွက်ကိုကြည့်နေရင်း လက်ပတ်တင်းလာအောင် ဘောလုံးကိုညှစ်ပါ။ သင်မှန်းထားတဲ့ အပေါ်သွေးဖိအားထက် ၃၀ မီလီမီတာမာကျူရီ ကျော်သည်အထိ ညှစ်ပါ။ လက်မောင်းမှာ တင်းလာတာကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ဒိုင်ခွက်ကိုကြည့်နေရင်း လေပေါက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဖွင့်ပြီး လက်ပတ်ကိုလျော့ပါ။
သွေးခုန်သံကို သေသေချာချာ နားထောင်ပါ။ သွေးခုန်သံ ပထမဦးဆုံးကြားရတဲ့အချိန် ဒိုင်ခွက်မှာဖော်ပြနေတဲ့ သွေးဖိအားဟာ သင့်ရဲ့ အပေါ်သွေးဖိအား ဖြစ်ပြီး သွေးခုန်သံ နောက်ဆုံးကြားရတဲ့အချိန် (သွေးခုန်သံ ပျောက်သွားချိန် သို့မဟုတ် အသံတိုးသွားချိန်) ဒိုင်ခွက်မှာမြင်ရတဲ့ သွေးဖိအားဟာ သင့်ရဲ့ အောက်သွေးဖိအား ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာ လက်ပတ်ကို မြန်မြန်လေလျော့လိုက်မယ်ဆိုရင် သွေးခုန်သံကို သေသေချာချာ ကြားရမှာမဟုတ်ဘဲ နောက်တစ်မိနစ်ကြာရင် အစကနေ ပြန်တိုင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂျစ်တယ်လ် သွေးဖိအားတိုင်းကိရိယာ အသုံးပြုခြင်း
သွေးဖိအားတိုင်းကိရိယာပေါ်ရှိ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
လက်မောင်းမှာပတ်ထားတဲ့ လက်ပတ်တင်းလာတာကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ကိရိယာက အလိုအလျောက်ဖော်ပြတဲ့ သွေးဖိအားကို မှတ်သားပါ။
သွေးဖိအားကို အချိန်သတ်မှတ်တိုင်းတာဖို့ (ဥပမာ နံနက်တစ်ကြိမ် ညနေတစ်ကြိမ် တိုင်းတာဖို့) သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကို အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲပ သွေးဖိအားတိုင်းတဲ့ အချိန်နဲ့ ရလဒ်တွေကို မှတ်သားထားပြီး သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ရက်ချိန်းပြတဲ့အခါ ယူဆောင်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးဖိအားကို တစ်ကြိမ်လျှင် နှစ်ခါ၊ သုံးခါ တိုင်းတာပြီး အကြိမ်အများဆုံးရတဲ့အဖြေကို အမှန်ယူသင့်ပါတယ်။
သွေးဖိအားအဖြေကို ကိန်းဂဏန်းနှစ်လုံးနဲ့ ပြလေ့ရှိပြီး ပထမဂဏန်းက သင့်ရဲ့ အပေါ်သွေးဖိအား ဖြစ်ပြီး ဒုတိယဂဏန်းက အောက်သွေးဖိအား ဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံမှန်အပေါ်သွေးဖိအားမှာ ၁၂၀ မီလီမီတာမာကျူရီနှင့်အောက် ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အောက်သွေးဖိအားမှာ ၈၀ မီလီမီတာမာကျူရီနှင့်အောက် ဖြစ်ပါတယ်။) အပေါ်သွေးဖိအား ၁၄၀ မီလီမီတာမာကျူရီနှင့်အထက် ဒါမှမဟုတ် အောက်သွေးဖိအား ၉၀ မီလီမီတာမာကျူရီနှင့်အထက် ရှိနေရင် သွေးတိုးတယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
သင့်သွေးဖိအားဟာ ၁၂၀/၈၀ နဲ့ ၁၄၀/၉၀ ကြား ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကို သွေးမတိုးမီ အကြိုအခြေအနေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၎င်းအခြေအနေကို သွေးတိုးတယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပေမယ့် သွေးတိုးနိုင်ချေ အလွန်များတဲ့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ သွေးတိုးခြင်းဟာ များသောအားဖြင့် ဘာလက္ခဏာမှ မပြတတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
သွေးဖိအားတိုင်းတာခြင်းဟာ နာကျင်မှုမရှိဘဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လွယ်လွယ်ကူကူ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အလျောက် သင့်သွေးဖိအားကို ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာတစ်ခုခုရှိလာရင် စောစောသိပြီး စောစောကုသနိုင်သလို သင့်မှာ သွေးတိုးရောဂါရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်း သင့်အခြေအနေ တိုးတက်မှုရှိမရှိ သိနိုင်တဲ့အပြင် သွေးဖိအား အလွန်အမင်း တက်ရာကတဆင့် လေမဖြတ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Blood pressure measurement. https://medlineplus.gov/ency/article/007490.htm. Accessed May 19, 2017.
Measuring Blood Pressure. https://www.cdc.gov/bloodpressure/measure.htm. Accessed May 19, 2017.
Monitoring Your Blood Pressure at Home. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HighBloodPressure/KnowYourNumbers/Monitoring-Your-Blood-Pressure-at-Home_UCM_301874_Article.jsp. Accessed May 19, 2017.
4. Checking Your Blood Pressure at Home. http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/hypertension-home-monitoring#1. Accessed May 19, 2017.